सुविन भट्टराई, असार २८, २०७५
अतीत हर मान्छेको हुन्छ, हरमान्छेसित हुन्छ । कसैले अतीतलाई विस्मृतिको दराजमा गुम्स्याएर राख्छन्, कसैले अतीतलाई काँधैमा च्यापी सकी–नसकी घिस्स्याएर हिँड्छन् । अतीत जतिसुकै पतित होस्, राम्रो होस्, नराम्रो होस्, जस्तोसुकै व्यतीत भएको होस्, अतीत चाहे गीत भएको होस् चाहे शीत भएको होस्, अतीत बस् अतीत हो । पुरा पढ्नुहोस्
त्यो कालरात्रि नै थियो
कृष्ण भट्टराई, असार २८, २०७५
जसले मेरो आगमनको आलोचना गर्नुभयो, वास्तवमा त्यो उहाँहरूको मप्रतिको माया नै हो । उहाँहरू मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ । नत्र त उहाँहरूलाई म आए पनि, नआए पनि मतबल हुनु नपर्ने हो । यद्यपि मैले आफ्ना बारेमा खोइरो खन्नेहरू विरुद्ध एक शब्द बोलिन । अशेष मल्ल लगायतका व्यक्तित्वले अब त अति भयो, केही त बोल भन्नु भएको थियो । पुरा पढ्नुहोस्
आँखा खोल्ने स्टाटस
साप्ताहिक संवाददाता , असार २८, २०७५
तस्बिरसँगै जुहीले लेखेकी छिन्– ‘काठमाडौंमा कार पर्खने क्रममा....कति धेरै धुलो, हावामा पेट्रोल र डिजेलको धुवाँ । त्यसैकारण हामीले अनुहार छोप्नु पर्‍यो । यहाँका बासिन्दाहरू प्रत्येक दिन सर्जिकल मास्क लगाएर हिँडन् बाध्य छन् ।’ जुहीको यो स्टाटसमा सयौं प्रतिक्रिया, सयौं रिट्वीट तथा हजारौं लाइक आएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
साँच्चिकै मन परेको छ भने बिहानदेखि साँझसम्म फलो गरिरहनुपर्छ । गुडमर्निङदेखि गुडनाइटसम्मका एसएमएस गरिरहनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
पानोरमा भ्यू–टावर रिसोर्ट, रानीकोट
उखरमाउलो गर्मी छ । त्यसमाथि सहरको धूलो, धूवाँ, प्रदूषण उस्तै छ । नियमित कामको तनावबाट केही दिन रिफ्रेस हुन कहाँ जाने ? काठमाडौं उपत्यका वरपरका डाँडाकाँडाहरूमा केही त्यस्ता रिसोर्ट छन्, जहाँ गएर गर्मी तथा प्रदूषण छल्न सकिन्छ । थोरै खर्चमा रमणीय वातावरणमा आफ्नो समय बिताउन चाहन हो भने यी गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
पुन: सँगसँगै अक्षय–जोन
एजेन्सी, असार २८, २०७५
बलिउडमा चलेको हल्लालाई मान्ने हो भने अक्षय र अब्राहम पटक–पटक गरम मसलाको सिक्वेल निर्माणका लागि छलफल गरिरहेका छन् । केही समय अघि मात्र अभिनेता जोनले संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘अक्षयसँग गरम मसाला–२ मा काम गर्न मन छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, असार २८, २०७५
यौन परिवर्तनका लागि आवश्यक आन्तरिक रसहरूको स्राव सुरु भएपछि किशोरावस्थाको थालनीसँगै यो लैंगिक अवस्था वयस्कको जस्तै भएर जान्छ र यौन उत्तेजनाको केन्द्र लिंगमा हुन्छ । यो अवस्थामा लिंग चलाउनु खेलाउनु र आनन्द प्राप्त गर्नु एक किसिमकले स्वभाविक रूपमै हुन थाल्छ । पुरा पढ्नुहोस्
समर फेसन एन्ड केयर
सिर्जना दुवाल श्रेष्ठ, असार २८, २०७५
अहिले जमाना रेडी टु वेयरको छ । ट्रेन्डी रन वे फेसनमा जे छ, म त्यस्तै किनिरहेकी हुन्छु । यद्यपि म ट्रेन्डको पछाडि कहिल्यै लागिनँ । ट्रेन्डमा आफूलाई सुहाउने सामग्री भित्रिएको छ भने किनिहाल्छु । म लबिम मलस्थित केडीएका पहिरन बढी किन्छु । स्टेजका लागि भने डिजाइनर वेयर नै लगाउँछु । अहिले पेज थ्रीका पहिरन बढी लगाइरहेकी छु । पुरा पढ्नुहोस्